बैठक कोठा कसरी चिटिक्क बनाउने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
बैठक कोठा कसरी चिटिक्क बनाउने ?
घरभित्र पस्ने बित्तिकैको पहिलो कोठा हो, बैठक कोठा । जहाँ हामी दिनभरको थकान मेटाउन आराम गर्छौं । बैठक कोठामै सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू एकसाथ लामो समय बिताई रहेका हुन्छौ । टिभी हेर्ने, एकापसमा गफ गर्ने तथा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने मुख्य ठाउँ हो यो ।
त्यसो त घरको सबै कोठाहरूको आ–आफ्नै महत्व हुन्छ । घरको हरेक कोठा आकर्षक हुनुपर्छ । त्यसमाथि बैठक कोठा त झन घरको अभिन्न कोठा नै भइहाल्यो । यसको साजसज्जामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । कोठाको सजावटको लागि हामी विभिन्न इन्टेरियर डिजाइनरहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेका हुन्छौं । जो कोहीलाई आफ्नो घरको बैठक कोठा अरुको भन्दा अलग र आकर्षक होस् भन्ने चाहना हुन्छ ।
बैठक कोठाको सजावट गर्दा स–साना कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्छन्, इन्टेरियर प्वाइन्ट प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद हुमागार्इं । उनले बैठक सजाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सुझाएका छन् ।
सही रङको छनौट
बैठक कोठाको रङ धेरै गाढा रङको नछानौं । यो कोठालाई आकर्षक बनाउन न्युट्रल रङको छनोट गर्नुपर्छ । सेतो रङ छान्दा पनि फरक पर्दैन । यस्तो रङले कोठा ठूलो र फराकिलो पनि देखिन्छ ।
बैठक कोठाको लाइट अन्य कोठाको भन्दा आकर्षक हुनुपर्छ । यदि लाइटिङ राम्रो भएन भने पुरा सजावट नै बिग्रिन सक्छ । कोठाको हरेक भागमा प्रकाश फैलिएको हुनुपर्छ । सिलिङको लाईट सेतो हुनुपर्छ र फोकसवाला लाईटहरू वामलाइट हुनुपर्छ । बैठक कोठामा एउटा मात्र बत्ति राख्दा आकर्षक देखिदैन ।
कोठामा राखिएको फर्निचर सहि स्थानमा भएन भने पनि कोठा नराम्रो देखिन सक्छ । सोफालाई कहिले पनि भित्तामा टाँसेर राख्न हुदैन । त्यसरी भित्तामा टाँसेर राख्दा कोठा ठूलो त देखिन्छ तर आकर्षक भने देखिदैन । टिभीलाई पनि गलत स्थानमा राख्नु हुँदैन । सोफा राखेको विपरित दिशामा टिभी राख्नुपर्छ ।
फोटो तथा आर्टको सजावट
घरको बैठक कोठाको भित्तामा विभिन्न फोटोहरू राखेर सजाउने काम प्रायःले गर्छन् । तर धेरै मात्रामा फोटोको प्रयोगले कोठाको सजावटलाई झनै बिगार्न सक्छ । त्यसैले बैठक कोठामा थोरै तर महत्वपूर्ण फोटोहरू मात्र राखेर सजावट गर्नुपर्छ ।
पर्दामा पनि दिनुपर्छ ध्यान
बैठक कोठामा प्रकाशको राम्रो प्रवाह होस् भनेर ठूलो झ्याल राखिएको हुन्छ । झ्यालको लम्बाई जत्रो छ, सोही साइजको पर्दा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि भूईंसम्म छुने पर्दा राम्रो हुन्छ । यस कोठामा राख्ने पर्दाको कलर भित्ताको कलरसँग सुहाउँदो हुनु पर्छ । पर्दा झुन्ड्याउने रड झ्यालभन्दा अलि माथि राख्नुपर्छ । यसो गर्दा बैठक कोठा ठूलो र आकर्षक देखिन्छ ।